योगी नरहरिनाथको योगीत्व - Suvham News
योगी नरहरिनाथको योगीत्व
यस देवभूमि नेपालमा ऋषिमुनि योगी सिद्धहरूको आगमन समयसमयमा भइराखेको देखिन्छ । नेपाल दैविक शक्तिले सिञ्चित गरिएको पवित्र भूमि हो । यो विश्व ब्रह्माण्ड दृश्य शक्ति र अदृश्य शक्ति दुई शक्तिले सञ्चालन भइराखेको छ । दृश्य शक्तिको अनुभव अनुभूति भौतिक शरीरले गर्न सक्छ भने अदृश्य शक्तिको अनुभव भने प्राणमय आध्यात्मिक शरीरले गर्ने गर्दछ । हामी मानवहरू नवमानवमध्ये एक मानव शरीर धारी हो । हाम्रो यो भौतिक शरीर अन्नमा आश्रित छ ।
सामान्यतया हामी सामान्य मानव स्वभावधारी व्यक्तिहरू अन्नद्वारा अन्नका लागि नै बाँचेको देखिन्छ । जुन हाम्रो समाजमा हामीले दिनहुँ प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिराखेका छौं । तर यसै धराधाममा हाम्रोजस्तै शरीर लिएर जन्मेका सामान्य मानव पनि योगी महामानव बनेको पनि हामीले देखि नै राखेका छौं । त्यसमा हात लिनु नलिनु आ-आफ्नो दृष्टिकोणमा भर पर्छ । त्यस्तै महामानवको रूपमा हाम्रो यो राष्ट्रले विसं. १९७१ फागुन १७ गतेका दिन प्राप्त गर्‍यो ।
हाम्रो यो नेपाल राष्ट्र विश्वको एकमात्र गुरु राष्ट्र हो किनभने यस गोरक्षक राष्ट्रमा प्रकाश अनन्त पुञ्ज छन् । त्यस्ता अनन्त प्रकाशको जन्म दिन अखण्ड दीपहरू नेपालभर बेलाबेलामा प्रज्वलित भई नै राखेको यथार्थ हामीसँग छ । त्यस्तै अनन्त ज्योतिमध्ये कर्णालीको कालीकोटमा प्रज्वलित भएका एक दिव्य ज्योति हुनुहुन्छ योगीराज योगी नरहरिनाथ हुन त योगीहरूको जन्म र मृत्युको आकलन हुँदैन । योगीका दृष्टिकोणमा जन्म र मृत्यु दुवै हैन सदा कोटी सूर्यको जस्तो प्रकाशमय यो जीवन छ । योगीको योगबाट विश्वले शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्दछ । योगको अर्थ जोड्नु हो । जीवात्मालाई आत्मासँग आत्मालाई परमात्मासँग, योगमा मुक्ति छ । प्राकृतिक अनुशासनले हाम्रो यो मानवजीवन भौतिक एवं आध्यात्मिक रूपमा निरोगी एवं आनन्दपूर्ण बन्नसक्छ यसको प्रमाणिकता हामीले योगी नरहरिनाथज्यूको जीवनबाट पाउन सकिन्छ । हामीलाई योगीजीको बाह्य परिचयभन्दा पनि आन्तरिक अन्तरमुखी उध्र्वगामी पश्चिमको अत्यन्त खाँचो छ । आउनुहोस् उहाँ कसरी सामान्य बलवीरसिंहबाट योगीराज गोरक्षनाथ अंशावतारी योगी नरहरिनाथ बन्नुभयो । थोरै शब्द विलाससहितको ज्ञान विलास गरौं ।
नौ वर्षको बलवीरसिंह थापा गोरक्षनाथ योग परम्परामा योगी श्रीप्रनाथबाट दीक्षित भइसकेपछि योगी नरहरिनाथको रूपमा जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरमा पुनः जन्म भयो र उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन हामी मानवमात्रको कल्याणको निमित्त खर्चिनु भयो । योगी नरहरिको यौगिक क्षमताको अगाडि हाम्रो यो सिंगो राष्ट्र र यसको राष्ट्र नीति पूर्णिमाको जूनका अगाडि प्रतिपदाको जूनजस्तो देखिन्छ । पञ्चतत्व (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश) ले बनेको यो शरीरलाई जो कोहीले सजिलै आफ्नो वशमा गर्न सकेको देखिएको छैन तर योगी नरहरिनाथले भने सम्भव गराउनुभएको देखिन्छ । शरीरभित्र रहेका पञ्चतत्वलाई प्राण वायुको वशमा गरी प्राण वायुलाई पनि सुक्ष्म शरीरको वशमा गरी सम्पूर्ण प्राण वायुलाई शिरमा चढाएर मस्तिष्कभन्दा माथि राखी विश्व ब्रह्माण्डको यात्रा गर्ने कलाले योगी नरहरिनाथज्यूलाई साधारण अवस्थाबाट नै महामानवको रूपमा परिभाषित गर्‍यो । जसलाई यौगिक भाषमा सहज समाधि भनिन्छ । समाधिको माध्यमबाट यस विशालको यात्रा गर्ने योगी नरहरिनाथले मानवधर्मको कुशल वक्ता बनेर हामीलाई मानवीयता सिकाउनु भनेको छ ।
योगी नरहरिनाथज्यूका हरेक कर्महरूमा भौतिक र आध्यात्मिकतथाको सामाञ्जस्य एउटा कलमा त्यसको आकार स्वरूप रस र स्वादजस्तै अनोन्याश्रित छ । वर्तमान विज्ञानले चर्मचक्षुले देखिने देख्न सकिने समस्या चुनौतीहरूसँग मात्र संघर्ष गर्ने सामथ्र्य राख्छ भने योगीको यौगिक विज्ञानले आध्यात्मिक चक्षुले देखिने र देख्न नसकिने समस्या र चुनौतीसँग सामना गर्न सक्ने सामथ्र्यता पनि राख्छ त्यसैले यौगिक विज्ञानले विश्व शान्ति विश्वकल्याण विश्वमैत्री विश्व करुणा कायम राख्न सक्छ । अहिलेसम्म हामीले योगी नरहरिनाथज्यूको बाहिरी दक्षताको परिचय पाएका छौं जस्तै उहाँ पुरातत्व इतिहास, आयुर्वेद, योग र पूर्वीय वाङ्मयको विश्वविद्यालय हुनुुहुन्थ्यो । समाजलाई राष्ट्रलाई विश्वलाई कल्याण गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि ज्ञानको कमि उहाँमा देखिएन ।
जीवनशैली तपाईं हाम्रा लागि वडा विचित्रको छ । जस्तै उहाँको खानपान, विहार अत्यन्त फरक शैलीको देखिन्छ । २४ घन्टामा उहाँ जम्मा धेरैमा आधा घन्टामात्र सुत्ने गर्नुहुन्थ्यो । जीवनभरि नुन र खुर्सानीको सेवन नगरी सम्पूर्ण जीवनयापित गर्ने योगी नरहरिनाथले आफ्नो मस्तिष्कलाई सदा गतिशील राखी आफ्नो कल्याण र संसारको कल्याण सँगसँगै गर्नुभयो । योगी नरहरिनाथजीको सदाआसनमा बस्ने अभ्यासले गर्दा २४ घन्टामा आधा घन्टामात्र वि श्राम गरे पुग्दथ्यो । प्राणयामको विधिबाट सम्पूर्ण चक्र र कुण्डलिनी जागरण भएको हुँदा उहाँको वाचनशक्ति धाराप्रवाह रूपमा घन्टौंसम्म बोल्दा पनि उहाँमा शक्तिको कमी भएको आभास हुँदैनथ्यो । २०३२ सालमा उहाँलाई त्यतिबेलाको सरकारले ३६ महिनासम्म नख्खु जेलमा कठिन कारावासमय यातना दियो ।
उहाँलाई मार्न भनेर कारागार भित्रै बस्ने आसन वरिपरि करेन्ट लगाउने र विष खुवाएर मार्नेजस्ता प्रयास गर्न पनि त्यति बेलाको सरकार पछि परेन । एउटा योगीका लागि आजै मर्नुपरे पनि कुनै चिन्ता हुँदैन हजारौं वर्षपछि मर्नु परे पनि कुनै चिन्ता हुँदैन सिद्ध योगीले मृत्युलाई पनि आफ्नो वशमा गरेर मृत्युलाई मृत्युदण्ड दिन सक्छन् । त त्यस्ता योगीको अंश भएका योगी नरहरिनाथलाई करेन्ट लगाएर मार्न खोज्दा तुरुन्त आसन बाँधी सम्पूर्ण प्राणलाई शिरमा लगेर मृत्युमाथि विजय गरी समाधिबाटै यात्रा गरी ‘आध्यात्मिक नेपाल’ भन्ने पुस्तक लेख्नुभएको छ । जसमा नेपालभरिका सम्पूर्ण तपोभूमिहरूको सार्थक परिचय दिनुभएको छ ।
२०१४ सालमा मानसरोवर कैलाश यात्रामा जाँदा हिममानवसँग भएको भेटलाई पनि योगीजीले ‘यो यति’ भन्ने पुस्तकमा लेख्नुभएको छ । गोरक्षनाथ पद्धतिको योग सिद्धान्तलाई आफूमा उतार्ने योगी नरहरिनाथ चिन्न सक्यौं भने हामीले हाम्रो उद्धारको मार्ग पहिल्याउन सक्छौं । योगी नरहरिनाथले आफ्नो दुवै मस्तिष्क (दायाँ र बायाँ) को प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो । जसको उदाहरण ‘लंका संकल्प’ भन्ने पुस्तकमा पाउन सकिन्छ । जुन ग्रन्थलाई योगीजीले श्रीलंकामा भएको विश्व हिन्दु सम्मेलनमा एक घन्टाभित्र जन्म गराउनुभएको थियो । योगजी बोल्दै सुन्दै लेख्दै तीन काम एकैपटक गरेको पनि विभिन्न ठाउँमा देखिएको छ । यी सबै योगी सिद्धिको प्रतिफल हो ।
योगी नरहरिनाथज्यूको विद्यार्थी जीवन पनि अत्यन्त अद्भुत छ । योगीजीको मेधावी क्षमता सामान्य छैन । परीक्षा कक्षमा नै बसेर १० अंकको निबन्धका लागि ३००१३ श्लोकको रचना गर्न सक्ने मेधावी क्षमतालाई सामान्य पक्कै भन्न मिल्दैन । अत्यन्त तीक्ष्ण बुद्धि भएको हुनाले उहाँका विद्या गुरु विश्वनाथ शास्त्री प्रभाकरले उहाँलाई लौहपुरुषको उपमा पनि दिनुभएको छ । त्यसैले गर्दा होला योगीजीलाई वैदिक वाङ्मयले अत्यन्त आकर्षित गरेको देखिन्छ । उहाँ आफ्ना हरेक वाणीमा वेदका मन्त्रहरूको उच्चारण नगरिकन कुनै पनि कुराको थालनी गर्नु हुँदैनथ्यो ।
संस्कृत भाषामा रचना गर्नुभएको सांख्य वसन्त, अन्योक्ति मुक्तावली, शान्ति चरितम् गोरक्षकल्प द्रुमः श्री गोरक्ष वसन्त स्तोत्र, गोरक्षस्तुतिः गोरक्षक्षस्तवः गोरक्षधन्याष्टकम्, गोरक्षरक्षवाले जस्ता काव्यहरू संस्कृत साहित्यमा अत्यन्त उच्च स्थान राख्छन् । इतिहास प्रकाशमा सन्धि पत्रसंग्रह, मेरो ऐतिहासिक शिखरिणी यात्रा, पशुपतिनाथ दर्शन महाशास्त्रम्, पशुपतिमन्तम, जय गोर्खा, हाम्रो देश दर्शन, देवता तीर्थमालाजस्ता ग्रन्थहरूल जो कोही मानवलाई पनि सत्य मार्गमा प्रेरित बनाइराख्छन् । संस्कृत भाषामा नै चिठीपत्र लेख्नुहुने योगी नरहरिनाथज्यूले भारतका अटलबिहारी वाजपेयीलाई लेखेको यो पत्रले पनि उहाँ संस्कृत मौलिकता र सरलतालाई पुष्टाएको भान हुन्छ ।
Prevगुरु गोरखनाथ र गोरखा र गोर्खाल्याण?
Nextगोरखा जिल्लाको सेरोफेरो